मुनाको मृत शरिरमा विजयले दूर्व्यवहार गरे कि ? « Bikas Times
मुनाको मृत शरिरमा विजयले दूर्व्यवहार गरे कि ?
पूर्वसचिव कार्कीकी पत्नी हत्या प्रकरण
मिति: February 13, 2020
काठमाडौं । पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको हत्या गरेपछि घरेलु कामदार विजय चौधरीले किन आत्महत्या गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न यति बेला प्रहरी लागि परेको छ ।
गत सोमबार बिहान १० बजेर १० मिनेटपछि भएको सो घटनामा संलग्नबारे अब कुनै शंका छैन । घटना २३ वर्षका विजयले नै घटाएको हो भन्ने कुरामा प्रहरी विश्वस्त छ । किनभने कार्कीको घरमा लगाइएको सीसी क्यामेरामा पनि विजयले भान्सामा काम गरिरहेकी मुनालाई पछाडिबाट डोरीले घाँटी बेरेर भुइँमा लडाएको देखेपछि प्रहरी घटना गराउने को हो भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट भइसकेको छ । तर विजयले किन त्यस्तो गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राप्त भएको छैन ।
प्रहरीले घटनाका सम्बन्धमा कार्कीको घरमा काम गर्ने तीन जनाको बयान लिइसकेको छ । पति अर्जुन कार्कीको अवस्था नाजुक भएका कारण उनलाई सोधपुछ गरिएको छैन ।
प्रहरीले घटनास्थलमा देखिएका भेटिएका सबै प्रमाण संकलन गरेको छ । मृतक मुना र विजयको शरिरको परीक्षण पनि गरेको छ । बाहिर चोटपटक हेर्दा मुनाको देब्रे स्तनमा टोकेको जस्तो चोट छ । उनको टाउकोमा पनि प्लास्टिकको पिर्काले हिर्काउँदा बनेको चोट छ । आँखा नीलो छ । घाँटी निसासिएका कारण उनको मृत्यु भएको बुझिएको छ । यो बाहेक उनी मासिक धर्ममा रहेका कारण शरिर प्राकृतिक हिसाबमै केही थिलथिलो छ ।
विजयले मुनालाई १० बजेर १० मिनेट जाँदा डोरीले घाँटी बेरेर लडाएको सीसी क्यामेराको फुटेजमा देखिन्छ । त्यसपछि क्यामेराको दृश्यमा उनीहरु देखिदैनन् । एकै पटक १० बजेर २३ मिनेटमा विजयले सात पटक पिर्काले मुनालाई हिकाउँछन् । त्यो १३ मिनेट विजयले मुनालाई के गरे ? यो प्रश्नको जवाफ छैन । किनभने हत्या गर्न पनि १३ मिनेट लाग्दैन । एक दुइ मिनेटमै मान्छे निसासिँदा मरिसक्छ ।
१० बजेर २३ मिनेटमा जब विजय क्यामेरामा देखिन्छन्, उनले प्लाष्टिकको पिर्काले मुनाको टाउकोमा सात पटक हिर्काँछन् । त्यसबीचमा उनले के गरे भन्ने स्पष्ट छैन ।
मुनालाई हिर्काइसकेपछि पनि विजय ४५ मिनेटसम्म घटनास्थलमा ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् ।
मुनाको घाँटीमा डोरी बेर्नुअघि पनि विजय मुनाको वरिपरि घुमिरहेका थिए । जसबाट उनी कुनै अपराध गर्ने योजनामा रहेको प्रहरीको अनुमान छ ।
जब पुूर्वसचिव कार्की ११ बजेर २० मिनेटमा घरमा पस्छन्, मुना रक्ताम्य भएर लडिरहेको र विजय पनि अर्को तिर ढलिरहेको देख्छन् ।
१० बजेर १० मिनेटदेखि ११ बजेर २० मिनेटको अवधिमा घरमा विजय र मुना बाहेक अरु हुँदैनन् ।
विजयको शरिर परीक्षण गर्दा उनको टाउकोमा चोट लागेर ज्यान गएको देखिएको छ । उनको कट्ट्ुमा वीर्य र रगत भेटिएको छ ।
आत्महत्या गर्दा अधिकांश घटनामा वीर्य निस्किने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । यसकारण उनको वीर्य स्खलन भएको नभएर निस्केको प्रहरीको बुझाइ छ । उनको कट्टुमा लागेको रगत र फोहोरको सम्बन्ध मुनाको महिनावारीसँग त छैन ? कतै मुनाको हत्यापछि विजयले मृत शरिरसँग कुनै दूव्र्यवहार त गरेनन् ? यो प्रश्न यति बेला उब्जेको छ । रगतको परीक्षणपछि त्यो रहस्यको पर्दा पनि खुल्नेछ ।
तर पनि विजयभित्रको त्यो आपराधिक सोचको कारण भने पत्ता लगाउन अझै गाह्रो हुने देखिएको छ ।
सरकारले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गर्ने निर्णयसँगै डिजेल र पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडौँ — सरकारले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्वाधार विकासको करको
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जन्मोत्सवलाई विवादमा ल्याउन खोजिएको आरोप-मन्त्री भएर जाँदा बाजा बजाए, नाचे र उत्सव मनाए, पत्रकार किन दुःखी ?’
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जन्मोत्सवलाई विवादमा ल्याउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । उनले
पार्टीमा विवाद, संघर्ष हुनु स्वभाविक हो- पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
१५ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा विवाद,
बास्कोटाको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने – सरकारलाई बद्नाम गर्ने प्रयास भयो
१५ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक अडियो प्रकरणबारे बोलेका छन् र
सूचना विभाग दर्ता नं. : .../०७५-०७६